१ वर्षसँगै बस्दा धेरै पल्ट बच्चा फाʼ ल्न लगायो । यति धेरै राम्री आशाको यति ठुलो पिडा रुदै मिडियामा (भिडियो सहित) – Ap Nepal
बाँके – ‘मेरो म’हिना’वारी रोकिनै हुँदैनथ्यो । उस्ले मलाई बच्चा नराख्ने भन्दै दबाईको एउटा गो’ली खा’नुपर्ने ठाउँमा धेरै नै गो’ली खु’वाउँथ्यो । जस्ले गर्दा मेरो धेरै र’ग’त ब’गे’र म बे’हो’स् पनि भएको थिएँ । मैले उसंगको १ वर्षसंगै बस्दाको समयमा धेरै पटक आफ्नो पेटमा आएको बच्चालाई फा’लेको छु ।
धेरै पटक बच्चा फा’लेकै कारणले म अहिले निकै नै कम्जोर भएको छु ।’ यो मार्मिक भनाई हो, बाँके शम्शेरगञ्जकी आशा वि.कको । उमेरले जम्मा २० वर्षमा लागेकी आशाको यो भनाई सुन्दा जो कसैको पनि मन भक्कानिन सक्छ । उनले कुनै प’रपुरु’षसंग लागेर बच्चा फे’लेकी हैनन् । उनले आफ्नै श्रीमानको बच्चा पनि जन्माउन पाईनन् ।
उनको भनाई अनुसार उनले अन्तरजातिय बिबाह गरेको हुनाले श्रीमानले बच्चा राख्न नमानेका हुन् रे । आशाले करण खत्री नाम गरेका युवासंग प्रेम विबाह गरेकी थिईन् । उनीहरुको भेट एउट मेलामा भएको थियो । त्यो भेटले नै आशा र करणलाई श्रीमान श्रीमतीका रुपमा एक बनायो । तर आशाले करणबाट विबाह पूर्व जुन सुन्दर र सानो संसारको परिकल्पना गरेकी थिईन् त्यो भने एउटा श्रीमानको तर्फबाट पाउनु पर्ने माया, साथ र समर्थन भने पाईनन् ।
जातिय वि’भे’दकै कारण उनी आफ्नै श्रीमानबाट मायाको जालमा ल’पे’टिंदै आफ्नै सन्तानलाई गर्भमै तु’ह्याई रहिन् । करणलाई आशाको जात पहिला नै थाहा थियो । रपनि उनले आशालाई श्रीमती बनाई सक्दापनि श्रीमतीको जस्तो व्यवहार नगरेको गुनासो आशाले गरिन् । आशाको भनाई अनुसार करण उत्तम समयको पर्खाईमा थिए । उनले परिवारले स्वीकार गरेपछि मात्र बच्चा बनाउने कुरा आशालाई सुनाउँदै बच्चा नबनाउने योजना बताई रहे ।
आशाको म’हि’ना’वारी रोकिना साथ करणले उनलाई बच्चा नराख्न भन्दै बच्चा फा’ल्न’कोलागी औ’ष’धी’को प्र’योग गर्न भन्थे । आशा आफैमा एक शिक्षित युवती हुन् । तरपनि उनी किन श्रीमानबाटै पि’डित हुनु पर्यो ? त्यो पनि जातिय वि’भे’दको विषयमा ? यो कुरा आशाकै मुखबाट सुनौं ।
हेरौ यो पुरा भिडियो
Prevजाडोको खानुस् कोʼदोको ढिँडो, यस्ता छन् फाइदाहरू जानिराखौं